Agyede no Ma Yenya Awerɛhyem sɛ Owusɔre no Bɛba
Agyede no Abue Kwan Ama Owusɔre
Nkaedi no ma yenya hokwan kɛse susuw nhyira te sɛ owusɔre a agyede no bɛma yɛanya daakye no ho. Na ɛnyɛ Yehowa pɛ ne sɛ nnipa bewu. Ɛno nti na ɔhaw baako a ɛma yedi awerɛhow paa ne sɛ yɛn dɔfo bi bewu no. (1Ko 15:26) Bere a Yesu hui sɛ n’asuafo redi Lasaro wu ho awerɛhow no, odii yaw. (Yoh 11:33-35) Sɛnea Yehowa te nka no, saa pɛpɛɛpɛ na Yesu nso te nka. Enti, yebetumi anya awerɛhyem sɛ Yehowa nso di yaw bere a yedi yɛn dɔfo bi wu ho awerɛhow no. (Yoh 14:7) Yehowa hwɛ bere a obenyan n’asomfo afi owu mu no kwan denneennen. Ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛhwɛ kwan saa ara.—Hio 14:14, 15.
Esiane sɛ Yehowa yɛ n’ade pɛpɛɛpɛ nti, yebetumi anya awerɛhyem sɛ ɔbɛyɛ nhyehyɛe pa de anyan awufo. (1Ko 14:33, 40) Saa bere no, yɛrenyɛ ayi bio, na mmom yɛbɛma wɔn a wɔanyan wɔn no akwaaba. Wudwinnwen owusɔre no ho, titiriw bere a wo dɔfo bi awu no? (2Ko 4:17, 18) Woda Yehowa ase wɔ agyede a ɔde ama no ho? Na woda no ase nso sɛ wama wɔaka wɔ Kyerɛwnsɛm no mu sɛ awufo bɛsan atena ase bio?—Kol 3:15.
Wo nnamfo ne w’abusuafo bɛn na wohwɛ kwan sɛ wobɛsan ahu wɔn bio?
Nnipa a Bible ka wɔn ho asɛm bɛn na wopɛ sɛ wuhyia wɔn na wo ne wɔn bɔ nkɔmmɔ?